Ogaden News Agency (ONA) – Tirada & Qaab-Dhismeedka Ciidanka Soomaaliya.
Tirada & Qaab-Dhismeedka Ciidanka Soomaaliya.
Shir ay ku yeesheen magaaladda Muqdisho La taliyayaal Dhinacyada Siyaasadda iyo amniga ee dowladda Federaalka iyo Madaxda Maamul goboleedyadda intii u dhaxaysay 15-16 bishan April ayaa lagu falanqeeyay qaab-dhismeen iyo tiradda Ciidamadda Soomaaliya.
Waxaa lasoo jeediyay, islamarkaana la isla qaatay in qaab-dhismeedka Ciidamada Soomaaliya ay ka koobnaan doonaan ciidamada Lugta, kuwa cirka iyo Badda. Waxaa kaloo lagu heshiiyay in tiradda guud ee ciidamada milaterigu ay noqdaan 18 kun oo askari, sidii kalena la dhiso Ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradoodu gaadhayso 4000 kun oo askari.
Waajibaadka ciidamada ayaa noqon doona ilaalinta xuduudaha iyo sharafta madaxbanaanida dhuleed ee jamhuuriyadda Soomaaliya, waxay kaloo u xilsaaran yihiin ka hortega khatarta dibadda iyo gudaha iyo xasilinta dalka. Intii uu socday Kulanku waxaa kaloo laga hadlay tiradda ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo lagu jaangooyay 32 Kun oo askari oo ka howgali doono dhammaan mamul goboleedyada Dalka
Waxaa socda dadaalo badan oo lagu doonayo in lagu dhiso ciidan tayo iyo tiraba leh oo ilaaliya jiritaanka qaranimada Soomaaliya. Gumaysiga Itoobiya oo ah cadawga koobaad ee qaranka Soomaaliyeed ayaa aad wadnaha farta ugu haya in at Soomaaliya cagta saartay tubtii qaranimada Soomaaliyeed.